Dhalinyaro ka tirsan al-shabab oo la dul dhigay Aduun lacageed - Awdinle Online
Dhalinyaro ka tirsan al-shabab oo la dul dhigay Aduun lacageed
January 14, 2020 (Awdinle Online) –Hay’adaha ammaanka Soomaaliya ayaa sheegay inay abaal marin lacageed ku bixinayaan cidii soo sheegta macluumaad sababi kara in la soo qabto shaqsiyaad katirsan kooxda Al-shabaab oo ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku riday xukunno dil ah.
Shaqsiyaadkan oo la faafiyay sawirradooda iyo magacyadooda ayaa ku eedeysan inay ka dambeeyeen dilal qorshaysan iyo qaraxyo ay ka geysteen gudaha Muqdisho iyo meelo kale.
Hay’adda amniga ayaa dhawaan siidaayay macluumaad ku saabsan shaqsiyaadkaan, iyagoo kusoo bandhigay barnaamijka Gungaar ee ka baxa warbaahinta dowlada, waxayna ka mid ahaayeen koox uu hogaaminayey nin la yiraahdo Ilkacase oo ka mid ahaa macalimiinta jaamacadaha dalka kaasoo markii dambe la ogaaday inuu yahay madaxa Al-shabaab ugu qaabilsan howlgalada Muqdisho.
Raggan sawiradooda la soo bandhigay ayaa dhamaantood lagu xukumay dil ka dib markii dacwadooda ay dhegeystay maxkamada ciidamada qalabka sida.
Hay’addaha ammaanku ma sheegin inta ay le’egtahay abaalmarinta dhaqaale ee la siinayo cida soo gudbisa xogta raggaan iyo halka xogtaas lala wadaagayo.
Previous articleWasiir ka tirsan Xukuumadda Kheyre oo Is casilay
Next articleBaasaboorada ugu liita dunida iyo kuwa ugu tayada wanaagsan